Kenya Airways ekweghị ịbanye na mbara igwe Tanzania
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Kenya Airways ekweghị ịbanye na mbara igwe Tanzania
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Igwe ojii gbara ọchịchịrị n’eluigwe East Africa nke kwụ n’etiti ha Kenya Airways na ndị isi ụgbọ elu nke Tanzania, mgbe steeti ndị agbata obi ha meghere igwe ha site na iji ụgbọelu na-atụ ụjọ.
Tanzania meghere igwe na ngwụcha ọnwa Mee, ebe Kenya mere otu nzọ ụkwụ na mbido ọnwa a, mana ụgbọ elu ndị agbataobi abụọ ahụ emezughị mgbe ndị ọchịchị Kenya wepụrụ Tanzania na ndepụta nke Covid-19- mba ndị nwere nchekwa nke ụmụ amaala ha ruru iji gaa Kenya.
Na-azaghachi mkpebi Kenya, Tanzania amachibidoro ụgbọ elu Kenya Airways ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu ya rue oge ọkwa ọzọ.
Esemokwu dị n’etiti Kenya Airways na ndị ọchịchị Tanzanian akpatakarịla ọhaneze azụmahịa azụmahịa ndị njem n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa, na-achọpụta njupụta ọnụ ọgụgụ njem nleta dị n’etiti ndị agbata obi abụọ a.
Civillọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọelu na Tanzania (TCAA) na July 30 kagburu atụmatụ iji hapụ Kenya Airways ịmaliteghachi ụgbọ elu, na-ekwu maka mkpebi Kenya wepụrụ Tanzania na ndepụta nke mba ndị a ga-ahapụ ụmụ amaala ha ka ha banye n'okpuru mgbochi coronavirus.
Onye isi ụlọ ọrụ Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) bụ onye isi ụlọ ọrụ Gilbert Kibe kwuru na ha na-eche okwu si na Tanzania, mana ha gosipụtara nchekwube na ihe ga-esi na ya pụta ga-adị mma.
Ka nzukọ ndị ọrụ ụgbọelu abụọ a mechara, a gwara Kenya ka ọ chere ka Tanzania za ya.
TCAA bu ụzọ kwere ka KQ maliteghachi ọrụ ndokwa na Dar es Salaam na Zanzibar.
Mịnịsta na-ahụ maka njem njem na Kenya bụ James Macharia gwara ndị mgbasa ozi Kenya na mbido ọnwa a na onye na-ahụ maka ụgbọelu na Tanzania buliri mmachibido iwu ahụ ma nye onye ọrụ ụgbọelu mba Kenya ịmaliteghachi ụgbọ elu n'isi ọnwa Ọgọstụ, mana mmachibido iwu ahụ ka dị.
Kenya Airways maliteghachiri njem ụgbọ elu mba ụwa na August 1, na-aga ihe dị ka ebe 30 maka oge mbụ kemgbe akwụsịtụrụ ụzọ ndị ahụ na Machị n'ihi COVID-19.
Tanzania bụ otu n’ime ụzọ gasị bara uru maka Kenya Airways yana ụgbọ elu ya na-agakarị na isi na azụmahịa na Tanzania na obodo ndị njem nleta gụnyere agwaetiti ndị njem njem nke Oke Osimiri Indian nke Zanzibar.
Kenya Airways amalitela njem ụgbọ elu nke ọnwa July na nke ụgbọ elu mba ọzọ na August.
A hụrụ ka esemokwu dị n'etiti Kenya na Tanzania n'oge na-adịghị anya ntiwapụ ọrịa a na-ebute ọrịa n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa, mgbe Kenya gbochiri ndị ọkwọ ụgbọ ala Tanzania ka ha ghara ịbanye na mpaghara ya, na-atụ egwu na ha ga-agbasa ọrịa ahụ.
Ndị ọchịchị Tanzanian emeela udo dị jụụ iji gboo oria COVID-19 wee mepee ókèala ya ọnwa abụọ gara aga.
Ndị East Business Community Council (EABC) lebara anya n'okwu a, na-arịọ Kenya na Tanzania ka ha gbasie ọsọ ike na-emeghe ikuku ikuku.
Onye isi oru EABC kwuru, “EABC na-agba ume, ndị East Africa Community (EAC) Partner States ka ha bute ụzọ mepee ụzọ mmeghe nke ụgbọ elu ikuku na-ekwenyeghi ekwenye ma mekọrịta otu ụzọ EAC ga-esi meghee oghere mpaghara mpaghara ụgbọelu. Executive, Peter Mathuki.
Dr Mathuki kwuru na imeghe ọrụ ụgbọ njem mpaghara ga-ejikọ ọnụ ahịa ọnya maka ngwa ahịa na-ebupụ nke mkpụrụ osisi ọhụrụ na njem mpaghara na-enyere ndị na-enye ọrụ aka ịbanye n'ahịa EAC buru ibu.